EspritBoom – Khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Waxaa qoray maamulka | Oktoobar 21, 2021
EspritBoom waa ciyaar qiyaas halxiraale cusub. Waxaad la yaabi doontaa caqli-galnimada aan caadiga ahayn ee lagu xallinayo rebus kasta. Haddii aad caqli badan tahay oo fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta, waxaad heli doontaa wakhti nasasho iyo raaxo leh oo lagu xaliyo xujooyinka., Waa in aad maskaxdaada u tababartaa sidii ay u xalin lahayd xujooyinka kakan adigoo isticmaalaya fikrado kala duwan., waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado tilmaamo tilmaamo qiimo leh.
Akhri halxidhaalaha oo qiyaas jawaabta.
• U dhig xarfaha block si wanaagsan oo u higgaad erayada qarsoon.
• Bilowgii, kuwani waa halxiraalaha fudud, laakiin dhibtu way kordhi doontaa marka heerka uu kordho.
• 4 noocyada xeeladaha tilmaanta ayaa kaa caawin doona inaad xalliso xujooyinka adag: tirtir dhammaan xarfaha aan la hubin ee ku jira block, soo bandhig xarfo random, muuji xarfaha block gaar ah,oo muuji ugu yaraan 3 xarfo.
• Iibka tilmaanta tilmaamuhu waxay ku kacaysaa qadaadiic, waxaadna heli kartaa abaal-marin u dhiganta qadaadiicda mar kasta oo aad ka gudubto heerka.
★ Way fududahay in la ciyaaro waxaana lagu xakameyn karaa hal gacan
★ Heerarka waaweyn ayaa ku sugaya inaad ciyaarto.
★ Looma baahna shabakad : ku raaxayso adduunka halxiraalaha iyo halxiraalaha!
★ Xaalado xayiran, waxaad isticmaali kartaa qadaadiic si aad u iibsato tilmaamo si aad jawaabta u hesho.
★ Inta badan ee aad gaadho heerarka dambe, ka adag oo xiiso leh!
★ Heerarka erayada adag, kicin iyo xiiso leh.
★ Hel tilmaamo bilaash ah maalin kasta oo ku xalli halxiraalaha jawaabaha.
Haddii aad sidoo kale tahay qof tafatiran, kan si fiican u fikira oo ku raaxaysta xallinta xujooyinka, marka waxaan aad kuugula talinayaa inaad la ciyaarto EspritBoom asxaabtaada si wada jir ah oo aad uga caqli badan tahay qof kasta oo kale !
EspritBoom waa ciyaar qiyaas halxiraale cusub. Waxaad la yaabi doontaa caqli-celinta aan caadiga ahayn ee xallinta dib-u-celinta kasta. Haddii aad tahay qof caqli badan oo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta, waxaad heli doontaa wakhti nasasho iyo raaxo leh oo lagu xaliyo xujooyinka. Dabcan, waa inaad maskaxdaada u tababartaa sidii ay u xalin lahayd xujooyinka kakan iyadoo la adeegsanayo fikir kala duwan. Qadaadiic ayaa ciyaarta ku jirta, waxaa loo isticmaali karaa in lagu iibsado tilmaamo qiimo leh.
• U dhig xarfaha baloogga sida saxda ah oo u higgaad erayada qarsoon.
• Marka hore kuwani waa xujooyin fudud, laakiin dhibtu way kordhi doontaa marka heerka uu kordho.
• 4 noocyada xeeladaha tilmaanta ayaa kaa caawin doona inaad xalliso xujooyinka adag: tirtir dhammaan xarfaha aan la hubin ee ku jira block, soo bandhig xarfo random, muujin xarfo ka soo jeeda block gaar ah, oo muuji ugu yaraan 3 xarfaha.
Iibka tilmaanta tilmaamuhu waxay ku kacaysaa qadaadiic, waxaadna ku heli kartaa abaal-marin u dhiganta qadaadiicda mar kasta oo aad ka gudubto heerka.
★ Looma baahna shabakad: ku raaxayso adduunka halxiraalaha iyo halxiraalaha!
★ Inta aad gaadho heerarka ugu dambeeya, waxaa ka sii adag oo xiiso leh!
★ dhib badan, heerar kelmado adag oo xiiso leh.
Haddii aad sidoo kale tahay qof fiiro gaar ah u leh faahfaahinta, si fiican u fikira oo ku raaxaysta xallinta xujooyinka, Markaa waxaan aad kuugula talinayaa inaad la ciyaarto EspritBoom asxaabtaada si wada jir ah oo aad uga caqli badan tahay qof kasta oo kale!
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: CheatsHack, EspritBoom
← Princess Fashion – Khiyaamo&Hack Dagaal Epic: carshiyo – Khiyaamo&Hack →